Apple inotangisa yechishanu yeruzhinji beta yeWatchOS 7 | Ndinobva mac
Apple inotangisa yechishanu yeruzhinji beta yeWatchOS 7
Chinhu chacho chave kudziya, kudziya. Vhiki rimwe chete mushure meyechina yeruzhinji beta ye WatchOS 7, Apple ichangoburitsa yechishanu. Uye inogona kunge iri yekupedzisira. Ngatione izvo zvinotitaridzwa nekambani pachiitiko chaicho pa 15. Kana iwe uchipa iyo Apple Watch Series 6, zvingave zvakanaka kuti uende nayo pamwe nekumisikidzwa zviri pamutemo kwewatchOS 7.
Dzimwe runyerekupe dzinoratidza kuti mune ino chiitiko inogona kuvhurwa iOS 14 uye iPadOS 14, kusiya zvimwe zvemafemu zvaGumiguru. Hatina imwe sarudzo kunze kwekumirira Chipiri chinotevera kuti tizive.
Apple yakaburitsa iyo yechishanu yeruzhinji beta yeiyo iri kuuya watchOS 7 yekuvandudza yevashandisi vakanyoreswa muApple yeruzhinji beta chirongwa, vhiki mushure meyechina yeruzhinji beta yaburitswa uye mazuva mashoma mushure mekuburitsa nyowani beta vhezheni yevagadziri.
Iyo watchOS 7 yekuvandudza inogona kutorwa pasi mushure mekusainira iyo peji peji kubva kuApple yeruzhinji beta. Iwe unofanirwa kusangana nezvinodiwa zviviri kuti ukwanise kuisa iyi yekuvandudza. Chekutanga, icho chako Apple Watch chinobva pane dzakateedzana 3, 4 kana 5. Hazvibvumirane neyekare Series 1 kana 2.
Chechipiri chinodikanwa ndechekuti iyo iPhone iyo yako Apple Watch yakabatana ndeye iPhone 6s kana gare gare, uye zvakakosha, izvo zvawakaisa iOS 14 mune chero ayo maviri ma beta shanduro, iyo yekuvandudza vhezheni, kana yeruzhinji imwe.
Kubva pano tinogara tichitaura chinhu chimwe chete. Kunyangwe yatove yechishanu yeruzhinji beta, kuisa firmware iyo ichiri muchikamu chekusimudzira inosanganisira yayo ngozi. Tinokurudzira kusaisa uye kumirira iyo yekupedzisira vhezheni, iri shoma.
Uye imwe njodzi inoitwa paApple Watch. Pane zvimwe zvishandiso, senge iPhone, semuenzaniso, kana yeruzhinji beta yeIOS 14 isingakugutsise, unogona kudzoreredza chishandiso uye kudzoreredza backup ne iOS 13 yawakamboita pakombuta yako. Sezvo pasina nzira yekubatanidza mumuviri Apple Watch kune komputa, hapana yakadaro sarudzo, saka haugone kudzokera kuWatchOS 6. Iwe pachako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inotangisa yechishanu yeruzhinji beta yeWatchOS 7
Mimestream: Nyowani chizvarwa cheGmail mutengi weMac nerutsigiro rwemaakaundi akawanda
Nyowani Yekuwedzera Yekuvandudza ye macOS 10.15.6